Wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay deegaanka Siinka-dheer ee duuleedka Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay deegaanka Siinka-dheer ee duuleedka Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa subaxnimada maanta qarax aad u weyn uu ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaano Siinka-dheer, halkaas oo ay ahayd goob ay ciidamada NISA ku baaraan gaadiidka Muqdisho soo galaya.
Qaraxaasi ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii ciidanka NISA ay istaajiyeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, islamarkaana damacsanaa inuu u gudbo magaalada Muqdisho.
Wadihii gaariga oo dareemay inay arrintu ku culus tahay ayaa qarxiyay gaariga, xilli ay baaritaanka ku haayeen ciidanka NISA ee goobtaasi ku baarayay gaariga.
Waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi uu ku geeriyooday mid ka mid ah askartii ka tirsanayd ciidanka NISA ee baaritaanka ku haysay gaariga, iyo ninkii goobta isku qarxiyay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askari kale oo ka tirsanaa ciidankaas.
Qaraxaasi ayaa waxaa sheegtay Al-shabaab, waxayna sheegeen in mid ka mid ah dagaalyahanadoodu uu weerar ku qaadey goob bar-tilmaameed ah, gaar ahaan halka ay ku sugan yihiin ciidamada NISA oo ay sheegeen inay ku dileen in ka badan 10 askari.